ny fianarana teny anglisy: aiza no hanombohana? – Taylor Lopes ツ Blog
ny fianarana teny anglisy: aiza no hanombohana?
Collection ny rohy sy ny toro-hevitra ho an'ireo izay mila sy te-hianatra teny anglisy, mandany mihoatra noho ny vola hatsembohana.
Kanefa raha izaho, tsy ny tsara indrindra aho olona hilaza aminareo ny fomba tokony hianatra ny fiteny, ok? Nefa nihevitra aho fa ho mahaliana ny hizara “zavatra” izay nanampy ahy. Inona no mitranga dia ny hoe, Angamba toa ny anao, Imbetsaka hitako ny tenako amin'ny toe-javatra izay “hianatra teny anglisy” Fa resaka maintsy. Ankehitriny izany no zava-tsarotra manokana, koa, mora. kanefa, mitohy dia herim-panahy izay mitondra antsika ho akaiky kokoa ny tanjona.
Ny famoriam-bola goavana (amin'ny teny anglisy) boky, Tutorials, horonan-tsary, ary maimaim-poana Internet sehatra fiadian-kevitra, indraindray dia mahazo ny ho lao tanteraka tsy mankafy izany fotsiny noho ny tsy fahafahany mahazo ny teny. mazava, dia afaka ho afa-maina tsy nahalala teny anglisy, fa izany tokoa hampitombo ny vintana raha afaka hahafehy izany, na dia amin'ny ampahany.
Tsy hoe mikatona sy ranom-Post dia mety hanampy fanazavana rehefa mandeha ny fotoana, noho izany, raha manana mangatsiatsiaka tendrony, aoka voasoratra ara-panjakana ao amin'ny fanehoan-kevitra. Tsaroako fa tsy manana fifandraisana amin'ireo toerana ary tsy afaka manaporofo ny fahombiazana. avy eo, Jereo avy eo hoe aiza no hanombohana, ataovy tsy am-pihambahambana!
7 Fitsipika mba hianatra teny anglisy
Araka ny Profesora A.J.. avo, tale “ezaka anglisy”, misy 7 fitsipika fototra ho an'ireo izay tena te “miteny amin'ny teny anglisy”. Hitako tena manan-kery amin'ny fomba maro, tena, Mitarika tsikelikely kokoa ho an'ireo izay liana amin'ny resaka noho ny mamaky, manoratra na hanatanteraka misy fitsapana. Araka ny 7 fitsipika ireo antsipiriany ao amin'ny lahatsary nataon'ny mpampianatra ity rohy http://www.effortlessenglishpage.com/p/7-rules.html, ary voatanisa eto ambany:
FANJAKANA 1 – Mianara amin'ny alalan'ny andian-teny tsirairay fa tsy amin'ny alalan'ny teny. Tsara ny hanorina fampiasana voambolana feno sazy noho ny miezaka mba handravaka teny mitoka-monina, araka izay rehetra, fehezanteny dia ahitàna andian-teny iray ka hanao heviny kokoa noho ny lisitry ny tokan-tena teny sy ny disjointed. Afaka mahita ireo andian-teny ao amin'ny boky ny podcasts na tantara marina amin'ny teny anglisy. Tsy tokony hitadidy ny lisitry ny teny. Tena mihaino Anglisy sy rehefa mandre na mamaky ny teny vaovao, soraty. Fa tsy manoratra fotsiny ny teny ihany, tokony hanoratra ny andian-teny na fehezanteny iray manontolo izay misy. avy eo, fa tsy hoe: “mankahala” na manoratra fotsiny “mankahala”, hoy ianao ary soraty “John mankahala gilasy-fanosotra”. Ianao manoratra ny didim-pitsarana manontolo. Phrases manome antsika fampahalalana bebe kokoa ary mora kokoa ny mitadidy, satria manana dikany, manana karazana sary, ny tantara. Rehefa mianatra andian-teny, fitsipi-pitenenana izay ianaranao koa. Mariho fa ao amin'ny didim-pitsarana teo aloha, “mankahala” manana “S” ary raha vao mampiasa ny teny tsirairay ny fomba nianaranao, tsy ampy, fa ao anatin'ny andian-teny ianao mianatra mampiasa ny teny tsara. Tsy mila mahafantatra ny fitsipika. Ankizy mampihatra sazy.
FANJAKANA 2 – Aza mianatra ny fitsipi-pitenenana fitsipika. Tendron'ny gaga ny olona maro ity ny olona! Ny fiainana manontolo nianaranao, raha mianatra ny fitsipi-pitenenana anglisy fitsipika, fa ny fanontaniana dia: dia niasa? Azonao atao ny miteny anglisy izao mora foana? Rehefa misy olona manontany fanontaniana, dia tsy maintsy ho haingana hamaly ary tsy misy fotoana hieritreretana ny prepositions, filazam-potoana, sns. Raha toa ny tompon-tany amin'ny fiteny hanomboka hiteny izy ireo, ela be talohan'ny any an-tsekoly hianatra fitsipi-pitenenana, nahoana izahay no tsy afaka manao toy izany koa? amin'ny fomba fanao, fitsipi-pitenenana ilaina fitsipika kokoa hanoratra noho ny miteny.
FANJAKANA 3 – Mianara avy ny sofinareo, fa tsy ny masonao. Izany no manan-danja indrindra fitsipika! mihainoa, mihainoa, hihaino sy handre bebe kokoa no ilaina mba hiteny tamin'ny teny anglisy. Tsy re fa ho hianatra voambolana, fitsipi-pitenenana, miteny misosa tsara sy hahatakatra tsara kokoa ny teny. Sekoly nampianatra Anglisy tamin'ny mifantoka amin'ny boky; izany hoe mianatra avy amin'ny maso ary miandany amin'i bebe kokoa noho ny teny soratra. Teratany mianatra miteny anglisy amin'ny sofinao, nandre, mihaino sy mandre.
FANJAKANA 4 – Mianara tsianjery. Namerimberina ary ny zavatra nianaranao. Izany no mahatonga hatrany ny ao anatin'ilay dia azo antoka ao an-tsainao. Ny ankamaroan'ny sekoly no manosika ireo mpianatra mba ho mafy, mametraka bebe kokoa ny teny vaovao isan-kerinandro mba hampitombo ny voambolana. Ny olana dia ny mpianatra efa ho manadino ny zavatra rehetra nianaranao na mahatsiaro fotsiny ny hevitra fototra, nefa tsy afaka hampiasa azy io amim-pahombiazana ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra. avy eo, mila miadana ary mamerina ny zavatra rehetra nianaranao indray sy hatrany hatrany. Tsy misy hazakazaka! Tsy maintsy mianatra lalina (manamafy orina), dia tena mianatra tsy hanadino izany ary, avy eo, raha ny marina dia afaka mampiasa azy io. Bebe kokoa ianao mila famerimberenana fotsiny!
FANJAKANA 5 – Mianara fitsipi-pitenenana ny fomba fihevitra amin'ny tantara fohy. Izany dia azo atao amin'ny alalan'ny filazana izany tantara, fa ny fanovana ny fomba fiheviny, amin'ny teny hafa, alternating-tsy eo, lasa sy ny ho avy. Izany no fomba hianarana ny fitsipi-pitenenana fitsipi-pitenenana nefa tsy nianatra fitsipika. ohatra: (1) IZAO: Misy zazalahy, ny anarany no Bill. Bill mandeha any amin'ny toeram-pivarotana. Izy mividy siny hoditra iray feno rano. Mandoa izy roa dolara ho an'ny rano. (2) TALOHA: Nisy ankizilahy iray antsoina hoe Bill. omaly, dia nandeha ho any amin'ny fivarotana. Ary izy nividy siny hoditra iray feno rano. Izy roa vola dolara ho an'ny rano. (3) HOAVY: Dia hisy zazalahy. Ny anarany dia hatao hoe Bill. Izy no handeha ho any amin'ny fivarotana sy izy Ho mividy siny hoditra iray feno rano. Izy no handeha handoa dolara roa ny rano. toy izany, Matetika ianao mihainoa izao tantara, toy ny zaza, ary tsy mila mieritreritra be dia be ny fitsipi-pitenenana na ny fihenjanana fitsipika dia ampiasaina.
FANJAKANA 6 – Fantaro ny fomba fampiasana fitaovana raha ny marina afa-tsy tamin'ny teny anglisy. Miezaha mampiasa ny fitaovana izay ny tompon-tany mampiasa. Mahatsiravina boky fianarana ny mamaky, na izany aza, raha te-hamaky teny anglisy, mifidy zavatra izay tianao, izay mora sy mahafinaritra. Izay no tsara indrindra famakiana karazana. Fa tsarovy ny hifantoka amin'ny fihainoana. Henoy, dia tsy maintsy ho 80% ny fianarana. Miezaha fihainoana Podcast amin'ny teny Anglisy momba ny toerana tena foto-kevitra. peo boky ireo fomba lehibe hafa koa ny mampihatra ny mihaino, fa manomboka amin'ny ankizy ny boky tantara sy hitandrina mihaino, mihaino ary ny mihaino raha tsy mahatratra mandroso ambaratonga, toerana ahafahanao mihaino ny CNN, BBC, sarimihetsika sy ny fampisehoana amin'ny fahitalavitra. Henoy ny tena fitaovana fa tsy teny Anglisy taranja CD.
FANJAKANA 7 – Mianara mihaino sy mamaly ny tantara fohy. Fomban-drazana sekoly mampianatra ny fomba mba hihaino sy avereno (henoy ary avereno). ohatra, Hoy ny mpampianatra: hamerina hanaraka Ahy, “Hi, manao ahoana ianao?”, ary miaraka mamerina izany. Mamerina fotsiny ianao tsy famoronana tena fifandraisana sy ny, indraindray, tsy manan-tsaina. Aza manao izany! Ny fomba mahery kokoa: hihaino sy hamaly (mihaino sy valiny). Ary noho izany teknika mba hihaino sy hamaly, ny mpampianatra dia manana mini-tantara, ary mahatonga fanontaniana maro mora, valiny haingana, amin'ny mety iray na roa teny. ohatra, ny mpampianatra te “Class, nisy zazalahy. Nisy ankizilahy iray?” ary haingana hoe “Eny, Eny“. Ny mpampianatra dia hoe: “Nisy ankizilahy na ankizivavy teo?” ary vonona valiny “ankizilahy, ankizilahy“. Ny mpampianatra dia hoe: “Ah, Azoko, nisy zazalahy. Inona ny anarany?” Tsy mahalala ny anarana, dia handaka zavatra toy ny “John“, na “Jim“. Ny mpampianatra dia hoe: “Ah, Eny, no anarany John“. Ary avy eo manohy ny fanontaniana bebe kokoa, mianatra mieritreritra amin'ny teny Anglisy, ary hamaly amin'ny teny Anglisy, haingana sy mora.
Links teny anglisy (abidy mba)
BBC Mianatra teny anglisy
fitsipi-pitenenana, Voambolana, horonan-tsary, Audios, sns. Araho andinin-teny amin'ny teny.
Ireo mpampianatra ao amin' ny Anglisy dia misy amin' ny fotoana tena misy., lehibe ho an' ireo izay tsy te hiandry ny fandaharam-potoana..
Curso manao Prof A.J. Hoge amin'ny lesona maro lahatsary, podcast ity, resaka, lahatsoratra, vocabulários.
Anarana iombonana amin'ny teny amin'ny lohateny lahatsary sy ny fifaneraserana
Anglisy Fa Ianao
Fantsona YouTube amin'ny lahatsary maro mikendry ny resaka ao amin'ny endriky ny saram-pianarana sy ny trano tranga miainga amin'ny mpanao voalohany ny kafa.
100 lesona, 1000 Common andian-teny, 1500 mahazatra indrindra teny, amin'ny teny rehetra.
Free Video lesona amin'ny teny anglisy! Foto-kevitra toy ny fandraharahana inglés, fahazavan-, kolontsaina & soso-kevitra, fomba fiteny, fitsipi-pitenenana, IELTS, Anarana iombonana, tenin-jatovo, Miteny, TOEFL, TOEIC, Vocabulaire y soratra.
Peo maro resaka amin'ny safidy maro-fanazaran-tena.
tsy mila fanehoan-kevitra: ny tsara indrindra mpandika teny an-tserasera (amin'ny teny) fiteny maro. Ankoatra ny mandika, Ampiasao izany ihany koa ny mpanao fihainoana sy ny teny.
Endri-javatra iray hafa mangatsiatsiaka ny Phrasebook (fomba fiteny malagasy), izay mamela anao mamorona ny lisitry ny teny for famerenana.
Izany toy ny lalao! A mozika (Clip) vava vola aminy, ary mila manohy na hiverina any isan-Keyword, miankina nandre / nahatakatra na tsia.
Tenin'ny ny andro
Fantaro teny vaovao isan'andro ary manao fanitsiana. Mangatsiaka ny mametraka ho pejy fandraisana mpitety faharoa.
Tadiavo mpampianatra teny anglisy amin'ny alalan'ny Skype avy amin'ny $ 2 / h.
Jereo koa ny fomba hanaovana iray fihenam-bidy 30% ao amin'ny kilasinao Preply!
(Raha toa ka tsy mahita ny varavarankely miaraka amin'ny fihenam-bidy, hanadio ny cache ny navigateur na mampiasa ny incognito varavarankely)
bava radio (ny fifantohana dia miteny fa tsy hira)
miteny onjam-peo mba hampiofanana ny “mihaino”.
fiaraha-monina ho an'ny fianarana teny nifantoka tamin'ny resaka (amin'ny chat y Webcam). Izany Karazana fiaraha-miasa: Anarana iombonana amin'ny teny ianao mampianatra portogey. To hahatakatra tsara kokoa ny, jereo lahatsary “Ahoana no tokony hatao? Fiteny Exchange”.
Mampanantena fa Hanome vahaolana feno ho hahafehy izany amin'ny teny Anglisy.
http://www.talkenglish.com/LessonIndex.aspx (ny lesona)
– Canal manao Voice of America
– miteny Yard
– TED (tsara)
Videos tsy misy dikanteny (resadresaka)
Voice of America – Mianatra teny anglisy
tranonkalam-baovao avy amin'ny teny. Misafidy ny foto-kevitra, ary tsindrio ny “milalao” hilalao ny peo raha manaraka ny andinin-teny.
Manampy hanatsara ny teny anglisy amin'ny alalan'ny lahatsary kely tsary. mampihomehy!
Rindrankajy nampiasaina mba hamorona vondrona / voambolana ho fahatsiarovana lisitry karatra fomba, mifanerasera soratra / teny sy ny fandikan-teny. Mamela anao mba ahitana sary sy ny feo ary afaka ihany koa ny mampiasa vonona-nanao lisitra hafa (dabilio).
– dabilio: https://ankiweb.net/shared/decks/english
Blog no Prof. Adir Ferreira miaraka amin'ny toro-hevitra tsara anglisy.
– fantsona YouTube: ny https://www.youtube.com/user/adirferreiraidiomas
American Ndao jatony ifandrimbonana hetsika mikendry ny ankizy sy ny beginners amin'ny teny anglisy (1 maimaim-poana volana).
Mitondra miara-jatony fanazaran-tena (indrindra fa ny ankizy) mba hianatra teny anglisy
Izao no Hiresahako
Fantsona Youtube an'i Prof. Leonardo Leite amin'ny lahatsary maro nifantoka tamin'ny resaka.
Free anglisy lesona
Site miaraka amin'ny soso-kevitra, fitaovana sy ny kilasy ho anao ny hianatra teny anglisy. Manaova Tour.
Ny lafiny maro io fikambanana nentim-paharazana ny fampianarana ambony ao amin'ny Angletera ho iray amin'ireo malaza indrindra sy manan-danja eto amin'izao tontolo izao.
Mazava ho azy Online anglisy
Prof. Ana Luiza amin'ny 50 lesona amin'ny teny anglisy. Sonia ny mba handray toro-hevitra amin'ny alalan'ny mailaka. Manaova Tour.
Mijery Dictionary Search
Linguee – Anglisy portogey Anarana iombonana
Cambridge – Dictionary anglisy portogey
Ianao mitady teny sy ny tranonkala dia mampiseho anao ny fomba hanaovana azy hoe amin'ny hafa accents.
Rakibolana ireo sary
ESOL Fanampiana – Sary en ligne
Longman ny Boky Torolalana ho An' ny Taona faha 3
Mahatakatra ny antony teknika “Sary hisarihana ny maso” afaka manampy anao handalina ny Teny Anglisy.
Course amin'ny asa ifandrimbonana, amin'ny App ho an'ny Android sy ny iOS. hisoratra anarana!
I elllo (Zavatra Language mihaino Library Online) dia-BOKIN'NY Vavolombelon'i Jehovah an-jatony lesona amin'ny lahatsary sy feo antontan-taratasy mba hampiofanana ny “mihaino”.
fitsipi-pitenenana, voambolana sy ny fanazaran-tena miaraka amin'ny valiny.
Website amin'ny lesona maro, Video, peo sy torohevitra.
ny manam-pahaizana anglisy
Breziliana Blog amin'ny Podcast, lahatsoratra sy toro-hevitra maro anglisy.
Ny votoatiny amin'ny teny Anglisy miaraka amin'ny fanazaran-tena.
Ao amin'ny lesona inglés Espresso mandeha aminao mivantana ny mailaka, Ankoatra ny antokony sy ny e-boky an-tserasera.
Aoka ny Master Anglisy
Profesora Coach Shane miasa tsara mihaino / Anarana iombonana (DDM taranja sy pIRF), ary koa ny podcasts sy lahatsary.
fitsipi-pitenenana, Voambolana, Audios, lalao sy ny maro ifandrimbonana fanazaran-tena.
Resaka ao amin'ny lahatsoratra sy ny raki-peo.
Toerana amin'ny fianarana fandaharana (fandoavam-bola)
UOL – anglisy Course
kilasy na velona manokana vondrona (na ao) videoconferencing in fomba (Mipetrapetraka).
Total isan'ny Hits: 14683
6 Septambra 2014 Taylor Lopes	hianatra teny anglisy, anglisy, anglisy, ny fianarana teny anglisy
2 hevitra “ny fianarana teny anglisy: aiza no hanombohana?”
Lady Susy nanao hoe::
Inona no hitanao tena sarotra? Amerikana na British anglisy?
6 Jona 2015 ny 14:51
Claudio Vaz nanao hoe::
Nahafinaritra ahy ny lahatsoratra, be dia be sy ny tanjona mifantoka amin'y vaovao tsara.
Ankehitriny aho mandeha manodidina ny bilaogy.
Misaotra ny tendron'ny.
24 Desambra 2016 ny 19:18
Copyright © 2021 taylorlopes.com satria Oct 2012, 2.776.258 fidirana